जस्तो विचार, उस्तै जिन्दगी !! | चितवन पोष्ट दैनिक
जस्तो विचार, उस्तै जिन्दगी !!
हाम्रो राम्रो परिणाम राम्रो विचारको साक्षात् उदाहरण हो । यदि हामीसँग दुःखद नतिजाहरु छन् भने हामीले दुःखद विचारहरु मानसपटलमा उत्पन्न गरेका थियौँ भनेर बुझ्नुपर्दछ । यदि हामीलाई आनन्द, शान्ति र सन्तोष उत्पन्न गर्ने परिणामको अपेक्षा र चाहना छ भने त्यसैअनुसारको विचार मनमा आउनु आवश्यक छ । मान्छेको जीवन नै उसका विचारको प्रतिबिम्ब हो । यदि सकारात्मक विचार धारण गर्दछ भने उसले सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्दछ, नकारात्मक विचार धारण गर्दछ भने नकारात्मक प्रतिफलमा चित्त बुझाउनुपर्दछ ।
आज हामीसँग उपलब्ध हैसियतका डिजाइनर स्वयम् हामी हौँ । हामीले हिजो जे सोच्यौँ वा विचार ग¥यौँ, हामी आज त्यही भयौँ । भोलि हामी जे बन्न चाहन्छौँ, आज त्यस्तै विचारलाई बारम्बार मनमा विकास गरिरहनुपर्दछ ।
आज हामीसँग हत्या, हिंसा, अशान्ति र अव्यवस्था छ भने हिजो हामीले यस्तै विचार ग¥यौँ भन्ने कुरामा शङ्का छैन । हामी जति नकारात्मक र ध्वंसात्मक विचारलाई धारण गर्दछौँ, त्यति नै हामीबाट नकारात्मक एवम् ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरु भइरहने छन् । यसो हुनुका पछाडि जहिले पनि हामीले लिने विचारको हात र साथ रहेको हुन्छ किनकि विचार नै हाम्रो व्यवहारका उत्पे्ररक हुन् ।
संसार सुन्दर र समुन्नत छ । यहाँ कुनै कुराको अभाव छैन । यो संसाररुपी महासागरबाट हामीले जे चाह्यौँ, त्यही ग्रहण गर्न सक्छौँ । केवल हामीमा चाहना हुनुप¥यो, इच्छा हुनुप¥यो । हामी कल्पना गर्ने कुरामा पनि गरिब छौँ, चाहने कुरामा पनि हिम्मत गर्न सक्दैनौँ । जब हामी आफूलाई सम्पन्न भएको विचार गरेर समेत अभ्यस्त तुल्याउन सक्दैनौँ भने सम्पन्न कसरी बन्न सक्छौँ ? आफूलाई सर्वहारा ठानेर हामीले गल्ती गर्दैछौँ, गरिब ठानेर गल्ती गर्दैछौँ र कमजोर ठानेर हामीले स्वयम्माथि अपराध गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो शरीर स्वयम्मा ब्रह्माण्डको एउटा सानो रुप हो । ब्रह्माण्डको गर्भमा हुने कम्पन र हाम्रो मुटुको चाल एउटै गतिमा गतिमान छन् । हाम्रो मुटुको चाल र घडीको चालले ब्रह्माण्डीय सजीवतालाई व्यक्त गरिरहेका छन् । यही ब्रह्माण्डीय सत्यसँग हाम्रो जीवनको सत्य पनि प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । समुद्र शान्त छ । शान्त समुद्रमा हामीले एउटा सानो ढुङ्गा फाल्यौँ भने पनि त्यसले आफ्नो प्रतिक्रियास्वरुप तरङ्ग पैदा गर्दछ । अनि त्यही ब्रह्माण्डबाट हाम्रा विचारबमोजिमको फल हाम्रो हातमा हामीलाई उपलब्ध हुन्छ ।
जीवन त्यसैले सुन्दर छ । हामीसँग सबैथोक छ । हामी कल्पनामा हरेक चीज पैदा गर्न सक्छौँ । हाम्रो मस्तिष्क खुला जमिन हो । हामीले त्यहाँ विचारको वीजारोपण गर्नुछ र त्यसअनुसारको नतिजाको खेती गर्नुछ । हामीले धान रोपेको खेतमा धान नै फल्छ । गहुँ रोप्यौँ भने गहुँ नै फल्छ । हामी रोप्नका लागि स्वतन्त्र छौँ । धान रोपेर गहुँको आशा गर्न सकिँदैन । खेत हामीले जे रोप्यौँ, त्यसको फल दिनका लागि तयार छ ।
यदि हामीले हाम्रो मस्तिष्करुपी खेतमा बारम्बार अभाव, रोग, शोक, दरिद्रता र अशान्तिका विचारवीजलाई रोप्छौँ भने सम्पन्नता, स्वास्थ्य र शान्ति कहिल्यै पाउन सक्दैनौँ । यदि स्वास्थ्य चाहने हो भने मस्तिष्कमा आफू स्वस्थ रहेको कल्पना बारम्बार गरिरहनुपर्दछ । धन चाहने हो भने आफू धनी भएको र बैंक खातामा प्रशस्त सम्पत्ति भएको विचार बारम्बार गरिरहनुपर्दछ । बारम्बार गरिएको यही विचार कालान्तरमा यथार्थमा बदलिएरै छाड्छ । यसमा दुई मत छैन ।
मान्छे बाहिर जति सुन्दर छन्, व्यवहारमा छैनन् । आजकै मान्छेबाट संसारको सुन्दरता पनि नष्ट हुँदै गएको छ । ब्रह्माण्ड अपार सौन्दर्य र ऊर्जाको खानी हो । हामीले त्यही सौन्दर्य र सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने विचारलाई मस्तिष्कमा विकसित गर्नुछ । संसार हामीले सोचेभन्दा भव्य र सभ्य छ । हामी पनि हामीले कल्पना गरेभन्दा सम्पन्न र वैभवले युक्त छौँ । हामीले आफ्नो सम्भावनालाई सीमित परिधिमा केन्द्रित गरेका छौँ । सानो घर, सानो पद, साना मान्छेसँगको सङ्गत, सानो विचार, थोरै सम्पत्तिको दायरालाई नाघेर हामीले असीम सम्भावनाको क्षेत्रमा कहिल्यै प्रवेश गर्ने हिम्मत र साहस गरेनौँ । प्रतिफलमा आज हामी साना मान्छेलाई साथी बनाएर सानो पदका कारिन्दा बन्दै सानो घरको सङ्कीर्ण परिधिभित्र कैद छौँ । तर हाम्रो जीवन अपार, व्यापक र भव्य सम्भावनाको केन्द्र हो ।
संसारमा आनन्द नै आनन्द छ । मस्तिष्कमा कहिल्यै पनि भय, शोक र अव्यवस्थाको विचार ल्याउनु हुँदैन । जुन कुराले हामीलाई पीडा हुन्छ, त्यो विचारलाई तुरून्त बदलेर आनन्द हुने विचारलाई तत्काल धारण गर्नुपर्दछ । हामी डराएरै बाँचेका छौँ । हामीमा अपमान, भूत, मृत्यु, आक्रमण, रोग आदिका भयहरु विद्यमान छन् । डर नितान्त हाम्रो मानसिकताको परिणाम हो । बाहिर कतै पनि भूत छैन र तर्साउँदैन । मरेको मान्छेको लाससँग डराउनु किन ? हामीले जीवलाई, पशुलाई त्यसको मासु खाँदा नलागेको डर मान्छेको मरेको मासु देखेर किन लाग्छ ! मरेको खसीको शरीर र मान्छेको शरीरमा ता¤िवक भिन्नता नै के छ र ? यदि मरेपछिको मान्छेको शरीर भूतमा बदलिन्छ भने खसी, बोका र कुखुराको शरीर पनि त भूतमा बदलिनु पर्ने नि ! त्यसैले भूतको डर नितान्त हामीभित्रको डर हो । भूतलाई हामीले लामो समयदेखि आफैँभित्र पालेर राखेका छौँ । यदि भित्रको भूतलाई लखेट्ने हो भने बाहिरको भूत आफैँ भाग्छ ।
सानैदेखि हामी केटाकेटीहरुलाई भूतप्रेतको डर देखाउँदछौँ । उनीहरुमा हामी भूत र प्रेत जन्माइदिन्छौँ । उनीहरु त्यसैलाई मनमा पालेर राख्दछन् र जीवनभर डराइरहन्छन् । हामीमा पनि हाम्रा बाबुआमाले भूत र प्रेतको डर देखाएर मनोबल कमजोर बनाउने काम गरे । वास्तवमा कतै नभएको भूत जन्माउने स्वयम् हामी नै रहेछौँ । यसरी हेर्दा भूतप्रेत पनि हाम्रै विचारका परिणति हुन् । हामी स्रष्टा हौँ, जे चाहन्छौँ सिर्जना गर्न सक्छौँ ।
तर जीवनको अर्थ नै आनन्द हो । हामीले नित्य आनन्दका स्रोतहरुको सिर्जना गर्नुछ । सिर्जनाको हतियार हाम्रो सङ्कल्प हो, विचार र सोचाइ हुन् । हामी त्यसैले पनि आनन्द उत्पन्न हुने किसिमका विचारहरुलाई मन र मस्तिष्कमा आउन दिऔँ । हाम्रो विचारको प्रथम भ्रूण नै हाम्रो सुख वा दुःखको सङ्केतक हो । कुनै पनि विचार यदि मनमा आयो भने त्यतिबेला हामीभित्र सकारात्मक वा नकारात्मक गरी दुई किसिमका भावहरु उत्पन्न हुन्छन् । हामीभित्र जन्मिएको विचारले यदि हामीमा खुसी ल्याएको छ, उमङ्ग र उत्साह वर्धन गरेको छ भने ब्रह्माण्डले त्यो विचार हाम्रो हितमा छ भन्ने प्रारम्भिक सूचना पठाएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि हामीले ग्रहण गरेको विचारले हामीमा प्रसन्नता ल्याउन सकेन र सकारात्मक उमङ्ग सञ्चार गर्न सकेको छैन भने त्यो हाम्रो हितमा छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसरी ब्रह्माण्डीय रहस्यको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरुले हाम्रा विचारप्रति तत्काल प्रतिक्रिया दिएर ब्रह्माण्डले हाम्रो भविष्यको सङ्केत गर्ने रहस्यको उद्घाटन गरेका छन् ।
त्यसैले आफूसँग कुनै पनि कुरा छैन र भएन भनेर दुःखी नहुनुस् । तत्काल आफूलाई अपार सम्पत्ति, इष्टमित्र, छरछिमेकी, मोटरगाडी, शुभेच्छुक र सहयोगीहरुको पूर्ण व्यक्तित्वका रुपमा कल्पना गर्नुस् । कल्पना गर्न कन्जुस्याइँ नगर्नुस् । सम्भावनाको सीमालाई भत्काएर भव्य र व्यापक सफलताको कल्पना गर्नुस् । बारम्बारको यो विचार र कल्पनाले तपाईं अन्ततः एकदिन आपैmँले कल्पना गरेअनुरुप आदर्श पात्रका रुपमा आफूलाई पाउनुहुने छ । जीवन कुरुप छैन, हामीले सोचेभन्दा हजारौँ गुना सुन्दर छ ।
हामीलाई जहिले पनि रूग्णता, गरिबी, शोक र अभावका लागि मात्र सोचविचार गर्न लगाइयो वा प्रेरित गरियो । हाम्रो त्यही विचारको परिणामका रुपमा आज हामीसँग अभावग्रस्त र पीडादायी जिन्दगी छ तर पनि ढिलो भएको छैन । हामीसँग विगतमा चाहे जेसुकै भएको होस् वा जस्तोसुकै हामीले सोचेका नै किन नहोऔँ, तिनलाई बदलेर एकाएक सम्पन्न व्यक्तित्वमा बदलिएको कल्पना गरौँ । यो कल्पनाले हामीभित्र एउटा सकारात्मक तरङ्ग उत्पन्न गर्ने छ र हामी रोमाञ्चित हुने छौँ । यो हाम्रो सकारात्मक र आनन्ददायी जीवनको पूर्वसङ्केत हुने छ । हामी स्वयम् हाम्रो जीवन र भोगाइका स्रष्टा हौँ । हामीले सोचेभन्दा फरक केही हुनेवाला छैन । हामीले जे सोच्यौँ वा विचार ग¥यौँ, यही हाम्रो वर्तमान हो । अब हामीले समृद्ध र सम्मानित जीवनको कल्पना गरौँ । यो पूरा ब्रह्माण्ड हाम्रो सपना साकार पार्न तम्तयार छ । कतै पनि निराशा, हिंसा, अभाव र अराजकतालाई स्थान नदिऊँ । सबै प्रसन्न छन्, सबै समृद्ध छन्, सबैमा शान्तिको अविरल धारा प्रवाहित छ । हामी, हाम्रो समाज, राष्ट्र र सम्पूर्ण विश्व नै अपार समृद्धि, सौन्दर्य र शान्तिको उज्यालोले धपक्क बलेको अवस्था छ । यही कल्पनाको चित्रलाई सबैले मन र मस्तिष्कमा बारम्बार दोहो¥याऊँ र सार्थक बनाउने यात्राको सुखद श्रीगणेश गरौँ ।
अघिल्लो लेखमासबैको प्रेरणाको स्रोत सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’
अर्को लेखमासामूहिक बलात्कार गरी फरार अभियुक्त १२ वर्षपछि पक्राउ